OPDOn kaleessa akka lammiif naatutti halaakaa oolte, har'a kunoo poolisii isiituu ari'anii Oromoo ajjeesaa, reebaafi hidhaa jiran. Oromia Shall be Free |
OPDOn kaleessa akka lammiif naatutti halaakaa oolte, har’a kunoo poolisii isiituu ari’anii Oromoo ajjeesaa, reebaafi hidhaa jiran.
bilisummaa January 14, 2016	Comments Off on OPDOn kaleessa akka lammiif naatutti halaakaa oolte, har’a kunoo poolisii isiituu ari’anii Oromoo ajjeesaa, reebaafi hidhaa jiran.
‪#‎OromoProtests‬ “Halaakaa oolus wadalli harree wareebessa niitii isaarraa hin dhoowwu” jedha mammaksi Oromoo
Ambotti lammiin Oromoo akka saree gola hundatti haleelamaa jira.
Yunivarsitii Dirree Dhawaatti daa’imman doormii itti cufanii akka midhaan oogdiirraa tumaa bulan, Shaashamanetti hiriira poolisiin Oromiyaa hayyame federaalli haleelee bittineesse. Haramaayatti qonnaan bulaa keenya ooyruu isaa keessa deemanii adamsaa jiran. Leemmanitti abbaa warraa irraa hidhanii haadhaa intala gudeedaa bulu.
Oromoo kan baasu qabsoo isaa finiinsee ol’aantummaa Tigree cabsee bilisa of baasuudha. Kana ammoo akka gaaritti itti jira, jabaatee fiixa baasuutu isaaf mala.
Previous Ethiopia confronts its worst ethnic violence in years
Next Ibsa Ijjannoo KWO/FIO